Mifanaraka Amin’ny Siansa ve ny Baiboly? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Altaï Alur Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Basque Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Efik Emberá (Chamí) Emberá Avaratra Emberá (Catío) Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frafra Frantsay Futuna (Atsinanana) Féroïen Ga Galicienne Galoà Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hamshen Armenianina Hamshen Sirilika Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Huaxtèque (San Luis Potosi) Hunsrik Iban Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabarde-Tcherkesse Kabuverdianu Kachin Kalanga (Botswana) Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kekchi Khakasse Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreola any Martinika Kreôla Jamaikanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Belize Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwanyama Laosianina Letonianina Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Luxembourgeois Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Mari Masedonianina Mashi Maya Mingrelian Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Myama Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niue Norvezianina Nyungwe Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Poméranien Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Quiché Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Rômania (Vlax any Rosia) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Serbia) Samoanina Sango Sateré-Mawé Sepedi Sepulana Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Israelianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tongan Totonac Touva Tseky Tsonga Turkmène Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Valencienne Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wichi Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Eny. Tsy boky fianarana siansa ny Baiboly nefa marina ny zavatra lazainy mifandray amin’ny siansa. Mifanohitra tanteraka amin’izay voasoratra ao amin’ny Baiboly anefa ny zavatra ninoan’ny olona tamin’ny fotoana nanoratana azy io. Diniho ireto ohatra vitsivitsy ireto:
Noforonina izao rehetra izao. (Genesisy 1:1) Milaza anefa ny angano maro fahiny fa tsy noforonina izao rehetra izao, fa avy tamin-javatra nikorontana, dia avy eo nalamina. Nino, ohatra, ny mponina tao Babylona fahiny hoe avy any amin’ny ranomasimbe roa ny andriamanitra niteraka an’izao rehetra izao. Milaza ny angano hafa fa avy amin’ny atody goavana iray izao rehetra izao.
Lalàn’ny natiora milamina tsara no mifehy an’izao rehetra izao, isan’andro, fa tsy hoe ny fihetseham-pon’ireo andriamanitra taitaitra. (Joba 38:33; Jeremia 33:25) Asehon’ny angano malaza maro eran-tany hoe tsy afa-manoatra ny olombelona rehefa manao zavatra tsy ampoizina ireo andriamanitra. Tsy misy indrafo mihitsy, hono, izy ireo indraindray.
Mihantona eo amin’ny tsy misy ny tany. (Joba 26:7) Olona maro taloha no nino hoe fisaka boribory ny tany, ary eo ambonin’ny olona goavam-be na biby toy ny ombidia na sokatra.
Lasa etona ny rano avy amin’ny ranomasimbe sy loharano hafa, ary avy eo lasa orana na lanezy na havandra rehefa milatsaka amin’ny tany ka mameno ny renirano sy loharano. (Joba 36:27, 28; Mpitoriteny 1:7; Isaia 55:10; Amosa 9:6) Nihevitra ny Grika fahiny fa avy amin’ny ranomasimbe any ambanin’ny tany ny renirano. Mbola nino an’izany ny olona na dia tamin’ny taonjato faha-18 aza.
Misondrotra sy mietry ny tendrombohitra, ary tany ambany ranomasina, taloha, ny tendrombohitra hitantsika ankehitriny. (Salamo 104:6, 8) Milaza kosa ny angano maro fa ny andriamanitra no namorona ny endriky ny tendrombohitra hitantsika.
Mitandro fahasalamana ny fahadiovana. Tafiditra tao amin’ny Lalàna nomena ny firenen’Israely ny hoe tokony hisasa izy ireo rehefa avy nikasika faty, tokony hatoka-monina ireo manana areti-mifindra, ary tokony hototofana ny diky. (Levitikosy 11:28; 13:1-5; Deoteronomia 23:13) Tamin’ny fotoana nanomezana an’ireo didy ireo anefa, dia nampiasa fangaron-javatra nisy dikin’olombelona ny Ejipsianina rehefa nitsabo olona naratra.
Tsia no valiny, rehefa dinihina izay voalazan’ny Baiboly. Ireto misy hevi-diso ananan’ny olona maro ka mahatonga azy hilaza fa tsy mifanaraka amin’ny siansa ny Baiboly:
Hevi-diso: Milaza ny Baiboly fa noforonina tao anatin’ny enina andro misy 24 ora izao rehetra izao.
Zava-misy: Tsy faritan’ny Baiboly hoe oviana Andriamanitra no namorona an’izao rehetra izao. (Genesisy 1:1) Fe-potoana tsy voafaritra koa ireo andro famoronana tantarain’ny Genesisy toko voalohany. Ny fotoana rehetra namoronana ny tany sy ny lanitra aza nantsoina koa hoe “andro.”—Genesisy 2:4.
Hevi-diso: Milaza ny Baiboly fa ny zavamaniry no noforonina talohan’ny masoandro, izay tokony hanome hazavana iveloman’ny zavamaniry.—Genesisy 1:11, 16.
Zava-misy: Asehon’ny Baiboly fa noforonina talohan’ny zavamaniry ny masoandro, satria anisan’ny kintana eny amin’ny “lanitra.” (Genesisy 1:1) Mbola nanjavozavo ny hazavan’ny masoandro tonga tetỳ an-tany, tamin’ilay “andro” voalohany, izany hoe tamin’ilay fe-potoana voalohany tamin’ny famoronana. Nihanisokatra tsikelikely ny habakabaka avy eo. Efa ampy tsara ny hazavana tonga tetỳ an-tany, tamin’ny “andro” fahatelo, ka nahavita niasa tsara hamelomana ny zavamaniry. (Genesisy 1:3-5, 12, 13) Taorian’izany vao tena hita miavaka tsara avy tetỳ an-tany ny masoandro.—Genesisy 1:16.
Hevi-diso: Milaza ny Baiboly fa mihodina manodidina ny tany ny masoandro.
Zava-misy: Hoy ny Mpitoriteny 1:5: “Miposaka ny masoandro, ary milentika, sady maika erỳ ho any amin’ny fonenany, ka avy any indray no iposahany.” Milazalaza ny fihetsiky ny masoandro jerena avy etỳ an-tany fotsiny anefa io. Mbola fitenin’ny olona hatramin’izao ny hoe “masoandro miposaka” sy hoe “masoandro mody” na dia fantany aza fa ny tany no mihodina manodidina ny masoandro.
Hevi-diso: Milaza ny Baiboly fa fisaka ny tany.
Zava-misy: Mampiasa ny teny hoe “faran’ny tany” ny Baiboly mba hilazana toerana lavitra be eto an-tany. (Lioka 11:31) Tsy midika anefa izany hoe fisaka ny tany na hoe misy farany. Toy izany koa ilay hoe “vazan-tany efatra.” Tsy midika izy io hoe misy zorony efatra ny tany. Maneran-tany fotsiny no tiany holazaina.—Isaia 11:12; Lioka 13:29.
Hevi-diso: Milaza ny Baiboly fa intelon’ny savaivony no refin’ny faribolana iray. Savaivo ampitomboina 3,1416 (pi na π) anefa no izy.
Zava-misy: Omen’ny 1 Mpanjaka 7:23 sy 2 Tantara 4:2 ny refin’ilay “fitoeran-drano lehibe”, ary lazainy ao hoe 10 hakiho ny savaivony. Lazainy koa hoe “tady telopolo hakiho vao nahodidina azy.” Mety ho noboriborina fotsiny ireo refy ireo. Mety ho ny ivelany indrindra amin’ilay fitoeran-drano koa anefa no norefesina mba hahazoana an’ilay savaivony, fa avy tao anatiny kosa no nandrefesana an’ilay faribolana.
Fantatrao ve hoe mifanohitra amin’ny Baiboly ny fampianarana sasany momba ny famoronana?
Hizara Hizara Mifanaraka Amin’ny Siansa ve ny Baiboly?
ijwbq no. 82
Oviana Andriamanitra no Nanomboka Namorona An’izao Rehetra Izao?